समानुपातिक विकार उपेक्षित पहाड, हिमाल
शेखर ढुंगेल –
हामी समानुपातिक बिकासको कुरो गर्छौ . सम्भाव्यताको सदुपयोग गर्दैनौ .हाम्रो मानसिकता मगन्ते भएको छ समाजसेवा देखि राजनीति सम्म बिदेशीको सहयोगमा गर्ने सोच्छौं भने कसरी हाम्रो राष्ट्रिय एकता स्वाधिनता एबम स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्छौ ? कसरी शान्ति सम्वृद्धि र आत्मनिर्भरताको पहुँचमा देश लाइ पुर्‍याउन सक्छौ ?
देशको सम्वृद्धिको लागि वा आत्मनिर्भरताको लागि देशको पूर्ब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै भूभागका नागरिकको समान सुबिधा र बिकासको अधिकार सम्बोधन हुनु पर्छ । आफु जन्मेको माटो मै शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर पाउनु पर्छ तर नेपाली नागरिकहरु त्यो अधिकारबाट बन्चित छन् । राजधानी र शहर मात्र केन्द्रित बिकास निर्माण एबम मानवीय संशाधनको कारण हिमाल पहाड अपेक्षित बिकासबाट बन्चित हुनु परेको छ । समयमा उपचार नपाएर सुत्केरीदेखि सिटामोल न पाएर जीवनजल नपाएर बार्षिक हज्जारौ महिला बालक बृद्धाहरुले ज्यान गुमाउनु परेको कहालीलाग्दो र अमानवीय राज्यको प्रमाण भएको छ । हिमाल पहाड मानब शून्य हुँदै जाादा प्राकृतिक बातावरणमा समेत नकारात्मक असर परेको हुँदा त्यसको रक्षाको लागि पनि समानुपातिक विकास चाहिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा मैले एउटा बिषयमा तिनवटा विकल्प पर्यटन मन्त्रीलाइ लगातार अनुरोध वा सल्लाह सुझाब दिएको थिए । कुनै मन्त्री वा सचिबबाट सकारात्मक जवाफ समेत आएन भने पछि कार्यान्वयनको कुरो त टाढा हुने नै भयो । मैले लेखेर दिएको थिए–
१. राष्ट्रको समानुपातिक निर्माणको लागि
२. हिमाली पहाडी क्षेत्रको आर्थिक सम्वृद्धिको लागि
३. पर्यटन क्षेत्र बिस्तार एबम बिकासको लागि
४. स्थानीय कृषि एबम पशुपालन ब्यबसायमा टेवा दिनुको लागि
५. हिमाल पहाडका नागरिकलाई शहर र विदेश पलायन हुन् रोक्नको लागि ६. आन्तरिक पर्यटनलाई थप टेवा पुर्याउनको लागि
७. स्थानीय सरकारलाई आर्थिक टेवा पुर्याउन को लागि पहाड हिमालमा कर (राजस्व) उठ्ने अन्य खास स्रोत नभएको हुँदा यो एउटा उत्तम बिकल्प हुनेछ भनेर ।
यसबाहेक क्यासिनो र पर्यटन विकासका बारेमा मैले अन्य देशमा देखेको उदाहरण यस्ता छन्–
क. पहाडी हिमाली क्षेत्र जुन राजधानी भन्दा न्यूनतम १०० कि मि टाढाको क्षेत्रमा कम्तिमा २ तारे स्तरको होटल खोल्न प्रोत्साहन गरौं र त्यहाँ क्यासिनो संचालन लगायत मनोरन्जनका सम्भावित बिकल्पहरु विकास गरौ र नेपालीलाई समेत क्यासिनोमा खेल्ने अनुमति दिउ । कारण अहिले नेपाली धनाढ्यहरु गोवा, मकाउ, बैङ्कक आदि ठाउमा क्यासिनो खेललाई लक्षित गरि छुट्टी मनाउन जान थालेका छन् । किन त्यो खर्च नेपालमा नै नगराउने ? त्यसको लागि न्यूनतम निश्चित आयस्रोतको सिमा तोक्ने र क्यासिनोको परिचय पत्र अनिबार्य बनाउने नियम राख्ने ।
ख. क्यासिनो सञ्चालन बिशुद्ध नेपालीको लगानीमा गराउने वा क्यासिनोको आम्दानी (फाइदा) बाट ३० प्रतिशत कर स्थानीय स्कूल वा स्वास्थ्य सस्था, बृद्धिबृद्धाको लागि अनिबार्य दिनु पर्ने नीति बनाउने ।
ग. क्यासिनोमा सबै तहको रोजगारीको प्राथमिकता पारदर्शी रुपमा स्थानीयवासीले नै पाउनु पर्ने ।
घ. राजधानी र शहरका क्यासिनोलाई हिमाल पहाडमा स्थानान्तरण गराउने वा नयाँ निर्माण अनुमति दिने नीति बनाउने ।
यसो गर्दा एक त बिदेशी पर्यटकहरुको नेपाल बसाइ लम्ब्याउन सहायक हुन्छ । अर्को हिमाल पहाडको आर्थिक स्तर बढाउन कोषे ढुङ्गा साबित हुन्छ । बिश्वमा कुनै पनि त्यस्तो देश छैन जहााँ आफ्नै देशको नागरिकलाई आफ्नो कमाइ आफूखुसी खर्च गर्न पाउने अधिकार बाट बन्चित गरिएको छ । नेपालमा मात्र किन ? यस्तो नियम परिबर्तन हुनुपर्छ ।
सृष्टिकर्ताले मानिसलाई दया करुणा सेवा र संबेदनशील प्राणी वा आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा बनाएको हुन् । तसर्थ जहाँ आबश्यकता देखिन्छ जहिले सम्भावना हुन्छ बिना तर्क बितर्क, बिना आफ्नो पराइको परिचय बिना फाइदा बेफाइदाको हिसाब, बिना सुबिधा असुबिधाको बहानामा दयाभाब देखाई हाल्नुपर्छ । सहयोगको हात बढाई हाल्नु पर्छ जहाँ आबश्यकता हुन्छ त्यहाँ आफैलाई उत्तरदायी वा जिम्मेवार सम्झी सहयोगको हात बढाउनु एक बिबेकशील नागरिक उदाहरण हुनु हो ।